Sawirro: Al Shabaab oo 600 oo neef geel ah diyo ahaan ugu kala wareejiyay beelaha Abgaal iyo Xawaadle | SMC
Home WARARKA MAANTA Sawirro: Al Shabaab oo 600 oo neef geel ah diyo ahaan ugu...
Sawirro: Al Shabaab oo 600 oo neef geel ah diyo ahaan ugu kala wareejiyay beelaha Abgaal iyo Xawaadle
Beelaha Xawaadle iyo Abgaal ayaa kala qaatay diyo gaareyso illaa 600 oo neef oo geel ah balse la lacageeyey, kadib kulan ka dhacay Gobolka Hiiraan oo ay soo diyaarisay Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanto Soomaaliya.
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Buq Aqable ee gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa diyo loogu kala wareejiyay beelaha Xawaadle iyo Abgaal oo la sheegay inay iska dileen dad badan oo kasoo kala jeeday labada Beel.
Munaasabadaan ayaa waxaa goob joog ka ahaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo u qaabilsan Gobolkaas, waxayna Al-Shabaab sheegtay inay soo afjartay colaad muddo badan u dhaxeysay labadaan Beel.
Labadaan Beel ayaa la sheegay in dadka diyada laga bixiyey isaga dileen Gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe oo ay kala dagaan labadaan Beel.
Imaamka Beesha Abgaal ee Shabaab aqoonsan tahay iyo Nabadoonno ka socday Beesha Xawaadle oo ku sugnaa munaasabadii diyada lagula kala wareegay ayaa soo dhoweyay hesiishka ay wada gaareen labadaan Beel.
Beesha Abgaal ayaa qaadatay 500 neef Geela oo ah diyada lix nin oo beesha Xawaadle ka dishay halka beesha Xawaadle ay qaadatay diyada 100 halaad oo ah diyada hal nin oo beesha Abgaal horay uga dishay.
Labada beelood ayaa ku heshiiyay in diyada lacag ahaan loo bixiyo waxaana calaa neef lagu qiimeeyay 400 oo dollarka Mareykanka ah.
Labada Beel ayaa kala qaatay lacag gaareyso ilaa 240,000 oo dollar [laba boqol iyo Afartan kun oo dollar] oo ah diyada 6 qof oo labada beel ka kala tirsanaa.
Previous articleDF Somalia oo war culus ka soo saartay kacdoonka ka billowday gobolka Bakool
Next articleXOG Al Shabaab oo qafaalatay xubno ka tirsan qoyska Mukhtaar Roobow